काँचो र उसिनेको अण्डा खाँदा हुन्छन यस्ता फाइदा, तपाई पनि थाहा पाउनुहोस — Sanchar Kendra
धेरैले गर्मी मौसममा अण्डा खान नहुने ठान्दछन् । तर यसको सेवन जुनै मौसममा पनि उपयुक्त हुने स्वास्थ्यविद् बताउँछन् ।
अण्डा खाँदा शरीरमा अनगिन्ती लाभ हुन्छ । अण्डामा हुने प्रोटिनले लामो समयसम्म मानिसलाई तृप्त राख्दछ । धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ, उसिनेको अण्डा खाएर पनि केही हदसम्म तौल कम गर्न सकिन्छ । तर कसरी ? अण्डामा के हुन्छ जसले तौल घटाउँछ ?
१. अण्डा प्रोटिनको उत्कृष्ट स्रोत हो । एउटा अण्डामा लगभग ६ ग्राम प्रोटिन हुन्छ जसले दैनिक आवश्यक पर्ने प्रोटिनको १२ प्रतिशत पूरा गर्ने गर्दछ । यदि तौल कम गर्न चाहनुहुन्छ भने अण्डा राम्रो विकल्प हो ।
२. अण्डामा सबै आवश्यक पोषक तत्व हुन्छ । एउटा उमालेको अण्डामा केवल ७० क्यालोरी हुन्छ । यदि दैनिक २ वटा अण्डा खादाँ केवल २ सय क्यालोरी मात्र सेवन गरिएको हुन्छ । क्यालोरी कम खानु पनि तौल कम गर्ने सबैभन्दा पहिलो कदम हो ।
३. अण्डामा प्रोटिनका साथै फाइबर र पानी हुन्छ । जसले धेरै बेरसम्म पेट टम्म बनाइराख्छ र भोक लागेको अनुभूती हुदैँन । यसले अन्य खानेकुराको तुलनामा ५० प्रतिशत बढि टन्न बनाउँछ । पेट टन्न भयो भने जे पायो त्यही खानेकुरा खानबाट बचिन्छ र तौल घट्छ ।
४. अण्डाले मेटाबोलिजम बढाउँछ । तौल घटाउनकालागि क्यालोरी बर्न गर्नकालागि मेटाबोलिजमको दर वा शरीरको क्षमता अत्यधिक हुनुपर्छ ।